Rangoon – ကောလဟလ သတင်းများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ ယနေ့ အသွားအလာနည်းပါးလျှက်ရှိ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဟန်သစ်နိုင် - ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုထက်ဆိုးဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၂၊ YPI – Yangon Press International News
သောကြာနေ့ ဖြစ်သည့် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒပြမှု၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုများ ဖြစ်ပွားမည်ဆိုသည့် ကောလဟလများ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထွက်ပေါ်လျှက်ရှိရာ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း လူအသွားအလာနည်းပါးလျှက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည် ။
မြို့လယ်တ၀ိုက်တွင် ဆိုက်ကားနင်းသူ တဦးက “ဒီနေ့မနက် ၉ နာရီခွဲထိနင်းတာတောင် ၁ ထောင်ပဲရသေးတယ်။ လူအသွားအလာ တော်တော်လေးရှင်းနေတယ် ” ဟုပြောသည်။
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတဦးက ရန်ကုန်မြို့လယ် အခြေအနေကို ဖုန်းဖြင့်လှမ်းမေးကာ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ အထက်တန်းကျောင်းတကျောင်းမှ မူလတန်းကျောင်းသားများအား ပြန်လာခေါ်ရန် မကြာသေးမီက မိဘများအား အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း တစုံတရာ ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်ထက် စိုးရိမ်မှုကြောင့် မိဘများအား အကြောင်းကြားခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းကပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆူးလေစေတီတ၀ိုက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မငြိမ်မသက်မှုများတွင် သေဆုံးသွားရသူများအတွက် ဆုတောင်းမှုများ ငြိမ်းချမ်းစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ။
One Response to Rangoon – ကောလဟလ သတင်းများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ ယနေ့ အသွားအလာနည်းပါးလျှက်ရှိ
U.G on June 15, 2012 at 11:57 am
ဘာမှထပ်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး…. ရှေ့ ဆက် အကောင်းဆုံးဘာဆက်လုပ်မလဲ. ဆိုတာ ပဲ စဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်… သမိုင်းကြောင်းတလျှောက်ရလာတဲ့မြန်မာပြည် ကြီးရဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ကအခုမှ အသားနုတက်ခါစလေး၇ှိပါသေးတယ်…. ဒါကို ထပ်ပြီးဒဏ်ရာဟောင်းအပေါ်ကို နောက်ထပ် ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ အနာ တခု ထပ် မဖြစ်ပါစေနဲ့ …အနာပေါ်ါအနာဆင့် သွားရင်ဘယ်လို ဝေဒနာခံစားရလဲဆိုတာ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခဲ့ဖူးကြသူတိုင်း သိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်……စိတ်ထိန်းကြပါ….